K.Kaabaa warshaa oomisha meeshaalee waraanaa keemikalawoo Siiriyaaf galteewwan ni kennitiif - BBC News Afaan Oromoo
K.Kaabaa warshaa oomisha meeshaalee waraanaa keemikalawoo Siiriyaaf galteewwan ni kennitiif
28 Guraandhala 2018
Goodayyaa suuraa Tibbana aara summaawaa 'Chlorine gas' jedhamu fayyadamuun lammiilee baha kutaa biyyaa Ghouta shororkeessaa turan
Kooriyaan Kaabaa meeshaalee oomisha meeshaa waraanaa keemikaalawaa Siiriyaaf galtee jabaa ta'an ergaafii akka turte miidiyaan Yunaayitid Isteetis argannoo Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii Wabeeffachuun gabaaseera.
Aarri summaawaan kallattiin iddoo qiyyaafannaa ga'ee haleellaa hamaa akka geessisuuf meeshaalee dandeessisan akkasumas ammoo qaama haleellaa geessisuuf meeshaalee golgaa ta'an dhiyeessaa akka turte gabaafameera.
Ogeeyyiin niwukilaraa Kooriyaa Kaabaa baayyinaan warshaalee oomisha meeshaa waraanaa keemikaalawoo Siiriyaa keessa hojjechaa akka jiran barruun Niwyoorki Taayimsi Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii wabeeffachuun gabaaseera.
Himati akkanaa kan Kooriyaa Kaabaa irratti dhiyaachuu eegale erga tibbana mootummaan lammiileerratti aara summaawaa 'chlorine gas' jedhamu fayyadamee namoonni hedduun dhumaniiti, mootummaan Siiriyaa garuu gocha kana haaleera.
Kooriyaan Kaabaa sababa sagantaa niwukilaraa isheef jecha qoqqobbii addunyaa jala jirti.
Gara xumura bara 2016 fi jalqaba bara 2017 keessa fe'umsi dooniidhaan yeroo shan karaa Chaayinaatiin Siiriyaa akka gale barruun Wall Street Journal jedhamu gabaaseera. Mootummaan Siiriyaas karaa dhoksaatiin Kooriyaa Kaabaaf kaffalaa akka ture barruun kun gabaaseera.
Goodayyaa suuraa Loltoota Kooriyaa Kaabaa
Mootummaan Siiriyaa namoonni Kooriyaa Kaabaa biyya isaa keessa jiran hojiin isaanii meeshaa waraanaa dhiyeessuu osoo hin taane abbootii seeraa ispoortiiwwan gosa garagaraa ta'anii hojjechuu isaaniin beeka jechuun Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniif yaada laateera.
Goodayyaa suuraa Aara wayita haleellaa naannawa Ghoutaatti raawwatame sameetti olka'ee mul'atu, Guraandhala 27,2018
Siiriyaan erga bara 2013 wayita aara summaawaadhaan lammiilee nagaa hedduun dhuman irraa eegaltee meeshaa waraanaa keemikaalawaa kamiyyuu akka hin fayyadamne waadaa seentus hanga yoonaa garuu lammiileen dararamaatuma jiru. Tibbanammoo naannawa baha Ghouta jedhamu riphee loltootatu maadheffatanii jiru jechuun lammiileerratti irraa fi jalaan meeshaalee waraanaa keemikaalawooodhaan haleellaan raawwate gidiraa hamaa ummatarraan ga'aatti jra.